Gịnị kpatara ego ji akpata ihe ọjọọ niile? | EKPERE NA OZI
Gịnị kpatara ego ji akpata ihe ọjọọ niile?
“N’ihi na ịhụ ego n’anya bụ mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile. Peoplef] d mmad, n'ach] inweta ego, agbak] woworo n'okwukwe ma were kwa] tt ihe mgbu maa onwe ha]. ”(1 Timoti 6:10).
Pọl dọrọ Timoti aka ná ntị banyere mmekọrịta dị n'etiti ego na ihe ọjọọ. Ihe ndị dị oke ọnụ ma na-egbukepụ egbukepụ na-ejide ọchịchọ mmadụ anyị maka ọtụtụ ihe, mana ọnweghị ego ga-emeju mkpụrụ obi anyị afọ ojuju.
Ọ bụ ezie na anyị enwerela onwe anyị ịnata ngọzi Chineke n'ụwa a, ego nwere ike ibute ekworo, asọmpi, izu ohi, aghụghọ, ịgha ụgha, na ụdị ihe ọjọọ niile. “Ọ dịghị ihe ọjọọ ọ bụla nke ịhụ ego n'anya agaghị eduga ndị mmadụ ozugbo ọ malitere ịchịkwa ndụ ha,” ka akwụkwọ bụ́ Exhibitor's Bible Commentary na-ekwu.
“N’ihi na ebe akụ unu dị, n’ebe ahụ ka obi unu ga-adịkwa” (Matiu 6:21).
E nwere ụlọ akwụkwọ abụọ nke Akwụkwọ Nsọ gbasara ego. Fọdụ nsụgharị Akwụkwọ Nsọ nke oge a na-atụ aro na naanị ịhụ ego n'anya bụ ihe ọjọọ, ọ bụghị ego n'onwe ya. Otú ọ dị, e nwere ndị ọzọ na-arapara n'ihe odide nkịtị. Na agbanyeghị, ihe niile anyị na-efe (ma ọ bụ na-ekele, ma ọ bụ na-elekwasị anya, wdg) karịa Chineke bụ arụsị. John Piper na-ede na “O nwere ike bụrụ na mgbe Pọl dere okwu ndị a, ọ maara nke ọma ụdị nsogbu ha ga-enwe, na ọ hapụrụ ha ka ọ na-ede ha n’ihi na ọ hụrụ echiche nke ịhụ ego n’anya bụ n’ezie mgbọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile, ihe ọjọọ niile! Ọ chọrọ ka Timoti (na anyị) chee echiche nke ọma iji hụ ya. "
Chineke mesiri anyi obi ike banyere ndokwa Ya, mana anyi na agba mbo inweta ndu. Ọ dịghị akụnụba nwere ike igboju mkpụrụ obi anyị afọ. N'agbanyeghị akụnụba ụwa ma ọ bụ ihe anyị na-achọ, e mere ka anyị chọọ karịa n'aka Onye Okike anyị. Lovehụ ego n'anya dị njọ n'ihi na e nyewo anyị iwu ka anyị ghara inwe chi ọzọ ma e wezụga naanị otu ezi Chineke.
Onye Hibru dere, sị: “Chebe ndụ unu site n'ịhụ ego n'anya, ka afọ ju unu n'ihe unu nwere, n'ihi na Chineke sịrị: 'M gaghị ahapụ gị ma ọlị; M gaghị aha gị aka ma ọlị ”(Ndị Hibru 13: 5).
Hụnanya bụ naanị ihe dị anyị mkpa. Chineke bụ ịhụnanya. Ọ bụ Onye na-egbo mkpa anyị, onye na-egbo mkpa anyị, onye na-agwọ ọrịa, onye okike na Nna anyị bụ Abba.
Gịnị mere o ji dị mkpa na ịhụ ego n’anya bụ mgbọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile?
Eklisiastis 5:10 na-ekwu, sị: “Onye hụrụ ego n'anya, ego adịghị eju ya afọ; Ndi nāhu àkù n'anya, afọ adighi-eju ha afọ. Nke a enweghị uche. “Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị ka anyị lekwasị anya na Jizọs, Onye malitere okwukwe anyị na Onye Mmezu anyị. Jizọs n’onwe ya kwuru ka e nye Siza ihe nke Siza.
Chineke nyere anyị iwu ka anyị kwụọ otu ụzọ n'ụzọ iri dịka iguzosi ike n'ihe nke obi, ọ bụghị nọmba a ga-enyocha n'ụzọ okpukpe site na ndepụta ihe anyị ga-eme. Chineke ma ima obi anyị na ọnwụnwa iji debe ego anyị. Site n’inye ya, ọ na-eme ka ịhụnanya ego na Chineke ghara ịdị n’ocheeze nke obi anyị. Mgbe anyị dị njikere ịhapụ ya, anyị mụtara ịtụkwasị obi na Ọ na-egboro anyị mkpa anyị, ọ bụghị site n’aghụghọ anyị nke ịkpata ego. “Ọ bụghị ego bụ mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile, kama 'ịhụ ego n'anya',” ka akwụkwọ akụkọ bụ́ Expositor's Bible Commentary na-akọwa.
Gịnị ka amaokwu a B NOTGH mean pụtara?
“Jizọs zara ya, sị,‘ Ọ bụrụ na ị chọrọ izu oke, gaa, ree ihe i nwere ma nye ya ndị ogbenye, ị ga-enwekwa akụ n’eluigwe. Mgbe ahụ bia soro m ”(Matiu 19:21).
Nwoke ahụ Jizọs gwara okwu enweghị ike ime ihe Onye Nzọpụta ya gwara ya. O di nwute, ihe onwunwe ya noro Chineke n’elu oche eze nke obi ya. Nke a bụ ihe Chineke na-adọ anyị aka ná ntị banyere. Ọ dịghị akpọ akụ na ụba asị.
Ọ na-agwa anyị na atụmatụ ya maka anyị karịrị ihe anyị nwere ike ịrịọ ma ọ bụ chee. Ngọzi ya dị ọhụụ kwa ụbọchị. Ekere anyi n’onyinyo ya ma buru ndi ezin’ulo ya. Nna anyị nwere atụmatụ dị mma maka ndụ anyị: ime ka anyị nwee ọganihu!
Chineke kpọrọ ihe niile anyị hụrụ n’anya asị karịa Ya.Ọ bụ Chineke ekworo! Matthew 6:24 ọdọhọ ete: “Baba owo kiet ikemeke ndinam n̄kpọ nnọ eteufọk iba. Ma ọ́ bụghị na ị ga-akpọ otu asị ma hụ onye nke ọzọ n'anya, ya abụrụ na ị ga-arara onwe gị nye otu wee leda onye nke ọzọ anya. Pughi ijere Chineke na ego ozi ”.
Olee ihe gbara 1 Timoti 6 gburugburu?
“Ma inyefe afọ ojuju bụ nnukwu uru, ebe ọ bụ na anyị ewetaghị ihe ọ bụla n'ụwa, anyị enweghịkwa ike iwepụta ihe ọ bụla n'ụwa. Ma ọ bụrụ na anyị nwere nri na uwe, afọ ga-eju anyị. Ma ndị chọrọ ịbụ ndị ziri ezi na-adaba n'ọnwụnwa, n'ọnyà, n'ọtụtụ ọchịchọ na-enweghị isi na nke na-emerụ ahụ nke na-akwakpu mmadụ na mbibi na mbibi. N'ihi na ịhụ ego n'anya bụ mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile. Ọ bụ n'ihi agụụ a, ụfọdụ ahapụwo okwukwe ha ma were ọtụtụ ihe mgbu maa onwe ha aghara aghara ”(1 Timoti 6: 6-10).
Paul dere akwụkwọ ozi a nye Timoti, otu ezigbo ndị enyi ya na ụmụnne ya n'okwukwe, agbanyeghị na o bu n'uche na ụka nke Efesọs (nke dị n'aka Timoti) gerekwa ihe dị n'akwụkwọ ozi ahụ. "N'amaokwu a, Pọl onyeozi na-agwa anyị ka anyị chọọ Chineke na ihe niile nke Chukwu," ka Jamie Rohrbaugh dere maka iBelieve.com. "Ọ na-akuziri anyị ịchụso ihe dị nsọ dịka oke oke agụụ, karịa itinye obi na mmetụta na akụ na ụba na akụ na ụba".
Isiakwụkwọ 6 dum na-ekwu banyere ụka nke Efesọs na ọchịchọ ha ịkpafu site na isi nke Iso Christianityzọ Kraịst. N’enweghi Akwụkwọ Nsọ iji buru ha dịka anyị siri dị taa, agwa dị iche iche nke okwukwe ndị ọzọ, iwu ndị Juu na obodo ha emetụtala ha azụ na azụ.
Paul dere banyere nrube isi nye Chineke, afọ ojuju ịbụ nke sitere na Chineke, ịlụ ọgụ ọma nke okwukwe, Chineke dị ka onye na-enye anyị na ihe ọmụma ụgha. Ọ na-ewuli elu na mgbe ọ na-atụ ihe iji wepụ ha site n'ihe ọjọọ na ịhụnanya hụrụ ego n'anya, na-echetara ha na ọ bụ na Kraịst ka anyị nwetara ezi afọ ojuju, Chineke na-enyekwa anyị - ọ bụghị naanị ihe anyị chọrọ, mana na-agọzi anyị na na. n'ofe ahụ!
Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary of the New Testament na-akọwa, sị: “Onye na-agụ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ nke gụrụ ihe osise ndị a nke ihe dị ka puku afọ abụọ na narị atọ nke akụkọ ihe mere eme ga-achọta ọtụtụ isiokwu ndị a maara nke ọma, ọ ga-akwadokwa ihe a Pọl kwuru na ego bụ isi ihe na-akpata ọbụbụenyi. , alụmdi na nwunye etisa, aha ọjọọ na ụdị ihe ọjọọ niile “.
Ndị ọgaranya hà nọ n’ihe ize ndụ ka ukwuu nke ịhapụ okwukwe?
Re ihe gi, nye ya ndi ogbenye. Werenụ akpa nke na-agaghị agabiga agabiga, bụ akụ dị n’eluigwe nke na-agaghị agwụ agwụ, ebe onye ohi na-adịghị abịaru nso, ebe nla na-adịghị ebibi ”(Luk 12:33).
Mmadụ ekwesịghị ịba ọgaranya tupu ọnwụnwa nke ịhụ ego n’anya adaa. John Piper na-akọwa, sị: “Thehụ ego n'anya na-eweta mbibi ya site n'ime ka mkpụrụ obi hapụ okwukwe ya,” "Okwukwe bụ afọ ojuju e nwere na Kraịst nke Pọl zoro aka na ya." Onye dara ogbenye, nwa mgbei na mkpa dabere na onye nwere akụ iji kesaa inye ya.
Diuterọnọmi 15: 7 na-echetara anyị na "ọ bụrụ na onye ọ bụla bụ ogbenye n'etiti ụmụ Izrel ibe gị n'obodo ọ bụla nke ala ahụ nke Chineke gị ga-enye gị, emela ka obi gị sie ike ma ọ bụ sie ike na ha." Ma oge ma ego dị mkpa, iji rute ndị nọ na mkpa ozioma, mkpa anụ ahụ ha iji dịrị ndụ ga-emezurịrị.
Marshal Segal dere maka iringchọ Chineke: "Ọchịchọ inwetakwu ego na ịzụrụ ọtụtụ ihe bụ ihe ọjọọ, na ihe ọchị na ọdachi ọ na-ezu ohi ma gbuo ndụ na obi ụtọ ọ na-ekwe." N’aka ozo, ndi nwere pere mpe nwere ike buru ndi n’enwe obi uto, nihi na ha matara na ihe nzuzo nke ajuju bu ndu n’ime ihunanya nke Kraist.
Ma ànyị bara ọgaranya ma ànyị dara ogbenye ma ànyị nọ n’etiti, anyị niile na-enweta ọnwụnwa nke ego na-ewetara anyị.
Olee otú anyị ga-esi chebe obi anyị ka anyị ghara ịhụ ego n'anya?
"Amamihe bu ebe mgbaba dika ego bu ebe mgbaba: ma uru nke ihe ọmụma bu nke a: amamihe na-echebe ndi nwere ya" (Eklisiastis 7:12).
Nnyin iyekpeme esit nnyin ke unana okuk ke ndikut nte ke Abasi ododu ke ebekpo esit nnyin kpukpru ini. Tetanụ ka gị na Ya kpee ekpere, ka ọ dị mkpụmkpụ. Hazie usoro iheomume na ebum n’uche site n’uche Chineke site n’ekpere na oge n’ime Okwu Chineke.
Edemede CBN a kọwara na “ego adịla oke mkpa na mmadụ ga-agha ụgha, na-egwu wayo, na-eri ngarị, na-ekwutọ ma na-egbu iji nweta ya. Hụ ego n'anya bụ ikpere arụsị kasịnụ “. Eziokwu ya na ịhụnanya ya ga - echebe obi anyị na ịhụ ego n’anya. Mgbe anyị daba n’ime ọnwụnwa, anyị anọghị ebe dị anya ịlaghachikwute Chineke, onye na-eche anyị oge niile ka anyị gbaghara anyị ma makụọ anyị.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ndụmọdụ taa bụ 13 Septemba 2020 nke St. John Paul II
Next Post → Post ozo:Ihe ngosi nke ụbọchị ikpeazụ na Mirjana na akwụkwọ edemede ahụ dị omimi (akụkọ site n'aka Mirjana n'onwe ya)